Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiyaha Shiinaha Fiber Optic AOOD
Wareegyada isku -dhafka isku -dhafka ah ee Fibre optic -ku waxay isku daraan giraan silig koronto leh oo leh isku -xidh wareegga fiber -optic, kaas oo bixinaya is -beddel badan oo isku -beddel ah oo loogu talagalay isku -xidhka korantada iyo indhaha. Cutubyadaan FORJ ee isku -dhafan ayaa oggolaanaya gudbinta aan xadidnayn ee awoodda, signalada iyo tiro aad u badan oo xog ah oo ka socota mid taagan si ay u noqoto goob wareegsan, ma aha oo kaliya inay hagaajiso qaabeynta nidaamka laakiin sidoo kale waxay keydisaa qiimaha.
AOOD waxay bixisaa isku -darka korantada iyo indhaha si aad u buuxiso baahiyaha kala duwan ee codsiyada. Giraanta silsiladda yar -yar ee aadka u yar ayaa laga yaabaa in lagu dhex daro kanaalka ugu yar ee FORJ si loogu wareejiyo xog hoose, signal iyo xawaare sare HD nidaamyada kamaradaha. Giraanta silsiladda korantada ee korontada ee xoogga badan ayaa laga yaabaa in lagu dhex daro kanaallo badan FORJ si loogu isticmaalo ROV-yada. Marka loo baahan yahay karti hawlgalinta jawiga qallafsan, guryo birta ka samaysan, xayndaab si buuxda loo xiray ama magdhow cadaadis dareere ka buuxo waa ikhtiyaari. Intaa waxaa sii dheer, unugyada isku-dhafan ee korontada-isku-dhafan waxaa lagu dari karaa ururrada dareeraha dareeraha si ay u siiyaan xal dhexdhexaad ah oo koronto ku shaqeeya, indhaha iyo dareeraha ah.
Ring Giraanta silsiladda korantada ee isku -dhafan oo leh isku -xidhka Rotary fiber optic
Transmission Gudbinta dabacsanaanta ee korontada, signalada iyo xogta baaxadda sare iyada oo loo marayo hal wadajir oo wareeg ah
Range Baaxad balaadhan oo ah ikhtiyaarrada korontada iyo indhaha
Circu Wareegyada korontada badan oo la kala dooran karo
La jaan qaada hab maamuuska baska xogta
Be Waxaa lagu dari karaa ururrada dareeraha ee dareeraha ah
Units Cutubyo isku jira oo kala duwan oo jira oo ikhtiyaari ah
Saving Badbaadinta booska iyo kaydinta kharashka
Standards Heerar tayo sare leh oo loogu talagalay naqshadeynta, soosaarka iyo imtixaanka
Reliability Kalsooni sare marka la eego gariirka iyo naxdinta
Operation Qaliin dayactir lacag la'aan ah
Systems Hababka kaamirooyinka hawada sare ee gacanta
Systems Hababka ilaalada
Machin Mashiinada iswada
■ Codsiyada Winch iyo TMS
Vehicles Baabuurta aan cidi wadin
Qaabka Kanaalada Hadda (amps) Danab (VAC) Cabir
DIA × L (mm) Xawaaraha (RPM)
Hore: Iskuduwayaasha Rotary Fiber Optic
Xiga: Siddo simbiriirixan badda
Iskudhafyada Rotary Hybrid Fiber Optic
Fibre Fiiqa Fiiqa indhaha oo leh St Fc Sc Lc Connector
Rov Fiber Optic Hybrid Slip Ring Goleyaasha